मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, आइतबारसम्म कति पर्यो आवेदन ? - Nagarik Today
होम » मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, आइतबारसम्म कति पर्यो आवेदन ?
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, आइतबारसम्म कति पर्यो आवेदन ?
by नागरिक टुडे साउन १८, २०७८
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा आएको आइपिओ खरिदका लागि आइबार साँझ ५ बजेसम्म मागभन्दा ३५ गुणाबढी आवेदन परिसकेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ । सो अवधिसम्म १७ लाख ७६ हजार ७११ जना आवेदकहरुबाट २ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४८० कित्ता शेयर खरीद माग भएको सिडिएसले जनाएको छ ।
कम्पनीले आइपिओमा छिटो अवधि साउन १८ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिने र सो समयसम्म मागअनुसार आवेदन नपरे साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भनेकोमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि छिटो अवधिमा मात्रै शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाइने भएको हो । कम्पनीले गत बिहीबारदेखि जारी पूँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजारमध्ये २० प्रतिशत अर्थात ७ करोड ३६ लाख २८६ रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन गरेको हो ।
प्रतिशेयर १०० रुपैयाँको अंकित मूल्यमा ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले निष्काशन गर्ने कूल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ७२६ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुलाई र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ८१४ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ।
बाँकी रहेको ६ लाख ६८ हजार ७४६ कित्ताका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आइपिओ खरिदका लागि लगानीकर्ताहरूले सि आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, तोकिएका शाखा कार्यालय, मेरो शेयर वेभसाइट र मेरो शेयरको मोबाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपिओले केयर रेटिङ्ग नेपालले वित्तीय दायित्व पुरा नगरेको वा छिटै पुरा गर्न नसक्ने जनाउने सङ्केत केयर एनपी डी रेटिङ्ग प्राप्त गरेको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्तामा सनराईज क्यापिटल रहेको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २९ करोड ४५ लाख १४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
IPOmailung kholashareshare marketshare market nepalमैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी
नेप्सेमा झिनो अंकको बृद्धि